TOAMASINA : Nosalorana samboady ireo filohan’ny pitsabo mpanampy sy mpampivelona vaovao
Nanao ny fihaonam-beny tao amin’ny toeram-pilanonana “La Famille”, Salazamay, ny fikambanan’ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (APM), izay ao anatin’ny sendikan’izy ireo (SISFM), ny sabotsy 13 mey lasa teo. 16 mai 2017
Lanonana telo sosona no niseho nandritra izany, izay natrehan’ny filoha nasionalin’ny Fikambanan’ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona Rakotondrazafy Aimé.
Voalohany tamin’ny lanonana ny fametrahana samboadin’ireo filoha vaovao hisahana ny Sendikan’ny mpitsabo mpanampy eto Toamasina, Rasoloniaina Barnabasy Felix sy ny filoha vaovaon’ny fikambanan’izy ireo, Totoriaka. Ireo mpitsabo mpanampy sy ireo mpampivelona ihany no nisafidy azy ireo nandritra ny fifidianana nataony.
Ny faharoa kosa dia ny famaranana andron’ny mpitsabo mpanampy sy mpampivelona, izay ny nankalazaina ny 5 mey teo ny andro iraisam-pirenena ho an’ny mpampivelona, ary ny 12 mey kosa ny an’ny mpitsabo mpanampy. Ny fahatelo farany dia ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao ho azy ireo, izay manamarika ihany koa ny fiatombohan’ny asa vaovao entin’ireo mpitantana azy ireo eo anivon’ny sendika sy ny fikambanana misy.
“Antoky ny fahombiazan’ny fahasalamam-bahoaka ny mpitsabo mpanampy sy ny mpampivelona ; tsy hisy raharaham-pitsaboana handeha amin’ny laoniny raha tsy eo izy ireo”, saika izay avokoa no nambaran’ireo nandray fitenana tamin’izao fihaonam-ben’ny APM sy ny SISFM teto Toamasina izao. Ho an’izy ireo anefa dia mitohy ny tolona amin’ny fanomezan-kasina ny asan’izy ireo, ka isan’ny andraikitra miandry ireo filoha vaovao roa lahy ny fanamafisana ny lafiny sosialin’izy ireo, ny fanatsarana ny tontolo araka asa, izay saika misedra olana matetika, ary ny tsy fanekena intsony ny fanaovana tsinontsinona azy ireo eo amin’ny sehatry ny fitsaboana. Ny taona 2016 lasa iny mantsy dia dimy ireo mpitsabo mpanampy sy mpampivelona maty noho ny fitsinjovana ny mpiara-monina sy famonjena ireo marary.
Ankoatra izay dia hiatrika ny zaikabe ny fikambanana sy ny sendika, amin’ny volana aogositra ho avy izao, izay hatao any Taolagnaro ; koa mandritra io zaikabe io no hanapahan’izy ireo ny hetsika manaraka entin’ny mpikambana miisa 12 000 amin’ny Faritra 22, manohy ny hetsika rehetra amin’ny fiarovana ny tombontsoan’izy ireo io, ka isan’izany ny momba ny mari-karama sy ny tambin-karama amin’ny asa vita…